Matte Lipstick Yakapfuma Pigmented Mineral Lipstick 100% Yemasikirwo Akaumbwa Asina-Chefu, Hutsinye uye Paraben Yemahara Yakareba Yakareba lipstick.
Yakanaka uye yakasimba, matte lipstick inotsvedzerera, inotapira, inopfeka-inomira, isina kuomesa uye ine ruvara rwakanyanya.
Yokutanga imwe:Yedu matte lipstick set ine inonyanya kufarirwa mavara emhando. Inoyevedza matte, inogara kwenguva refu uye isina mvura, iri nyore kubvisa nemuromo yekuchenesa mafuta. kupfava kugadzirwa nemucheka wakajeka kuti uchengetedze miromo yako yakatsetseka uye yakapfava.
Chechipiri chekutanga:Yakagadzirwa nemasikirwo echisikigo, emhando dzese dzeganda, kusanganisira ganda rakapfava. Nemhando yepamusoro matte lipstick, ivo vane pigmented kwazvo uye inogara kwenguva refu mhedzisiro.
Yakatsetseka uye yakapfava matte Lipstick, iyi inokatyamadza matte lipstick ine yakasvibira uye pigment matte color, uye iyo yakatsetseka matte mhedzisiro inogona pakarepo kutsvedza uye kuichengeta munzvimbo.
Confidante uye kurota, iyi matte lipstick haina kumbobvira yaoma, inogara iri cream, inorota uye matte! Ikozvino pane nhevedzano yematte matte mavara aunosarudza kubva. Aya akachenjera matte lipstick mavara ndizvo chaizvo izvo miromo yako inoda.
Chekutanga vatatu:Iyo silky, yakanakisa uye yakashongedzwa, gadzira miromo yako zvishoma, yakakodzera nguva dzese kugadzira, kunyanya muhofisi, kufambidzana, kushopa, kupembera neshamwari. Yakakwana sechipo kumudiwa wako, mhuri uye shamwari pazuva reKisimusi, zuva reValentine, zuva rekuzvarwa uye mumwe mutambo.
Isu tinonzwisisa kuti wakabatikana, ndosaka takagadzira iyi lipstick inotakurika. Iyo inouya iri compact fomu chinhu iyo iwe yaunogona nyore kupinza muchibhegi chako kana bhegi rekuzora.
Chechina chekutanga:Rakajeka muromo, wakajeka kupfuura edu akasarudzika mavara uye ekunyorova mhedzisiro. JOYO lipstick yakafuma muzvinhu zvinovaka uye inogona kupfavisa miromo yako.
Gorgeous Moisturizing Lip Ruvara, shandisa JOYO lipstick yekuchengeta miromo yakapfava, yakatsetseka uye yakanyorova. Sarudza kubva pamhando dzakasiyana-siyana dzekubata maziso kune imwe inogara kwenguva refu yakasvibirira uye yakasimba moisturizer.
JOYO Lipstick, kunyangwe iwe uchida ushingi mutsvuku lipstick kana rakashama rakashama ruvara, unogona kusarudza kara pazviitiko zvakasiyana. Sarudza Matt lipstick, gadzira yakakwira color toni, kana sarudza kirimu kara lipstick kuti ugadzire akatsetseka, akapfava uye akanyorova miromo.
Kunyorera Lipstick, mazuva ekuzvarwa, michato, mapato, Halloween magadzirirwo, mapato emabiko, mwaka wechikoro, zvipo zveZuva raValentine, zvipo zveKisimusi, nezvimwe
Pashure: Meso ekugadzira-BD-CH
JOYO © All Kodzero Dzakachengetedzwa. Zvinowanikwa Zvigadzirwa, Sitemap, Yakanakisa Makeup Brushes, Matte Eyeshadow Palette, Ndarama Ziso Makeup, Shimmer Lipstick, Mini Lipstick, Yakanakisa Cream Eyeshadow, Zvese Zvigadzirwa